Jubbalan oo diyaarisay Ciidamadii la wareegi lahaa deeganada ay gacanta ku hayan Al-Shabaab - Awdinle Online
Jubbalan oo diyaarisay Ciidamadii la wareegi lahaa deeganada ay gacanta ku hayan Al-Shabaab
Taliyaha ayaa sheegay in nolosha dadka ay kuso noqotay sidii caadiga aheyd oo ay helaan dhamaan adeegyada aas-aasiga ah ee nolosha sida Waxbarashada Caafimaadka iyo Biyaha, Aminigoodana ay sugaan Ciidanka Dowlad goboleedka Jubbaland.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in Jubbaland ay diyaarisay qorshihii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab laga soo saari lahaa gobolka Jubbada Dhexe, islamarkaana maalmaha soo socda ay la bilaabi doono.
Waxaa uu sheegay in goobaha kale ee weli gacanta ugu jira Al-Shabaab laga saari doono, islamarkaana Ciidanka Jubbaland ay qaadi doonaan howlgal ballaaran.
Taliyaha ayaa xusay in Ciidanka Jubbaland loo dhameystiray qalabkii ay kula dagaallami lahaayeen Al-Shabaab,islamarkaana Sanadkaan la xoreyn doono degaano badan.
Previous articleBankiga dhexe ee Somalia oo shacabka uga digay Shirkadaha Forex
Next articleDaawo:-Madaxweynaha Koofur Galbeed oo Xil ka qaadis iyo Magacaabis ku sameeyay Wasiiro katirsan Maamulkiisa.